Ahoana ny fomba fampiasana fivoriana amin'ny zoma mba handraisana an-tsoratra vahiny vahiny lavitra eo amin'ny podcast anao amin'ny làlan-kaleha | Martech Zone
Tsy azoko lazaina aminao ny fitaovana rehetra nampiasako na nosoratako taloha mba handraisana am-peo lavitra ny resadresaka podcast - ary nanana olana tamin'izy rehetra aho. Tsy maninona ny hatsaran'ny fifandraisako na ny kalitaon'ny fitaovana… ny olana momba ny fifandraisana tsy tapaka sy ny kalitaon'ny feo dia nahatonga ahy hanipy ny podcast foana.
Ny fitaovana mendrika farany nampiasako dia ny Skype, saingy tsy nihanaka ny fananganana ilay fampiharana ka saika nanana olana hatrany ny vahiniko tamin'ny fisintomana sy ny fisoratana anarana tao amin'ny Skype. Ankoatr'izay, tamin'ny fotoana nilaiko nividy add-on ho an'ny Skype handraketana sy hanondrana ny làlana tsirairay.
Zoom: Ilay mpanaradia Podcast tonga lafatra
Nanontany ahy ny mpiara-miasa amiko iray hoe ahoana ny fandraisako feo ireo vahiny lavitra tamin'iny andro iny ary nampahafantariko azy fa efa fanaoko izany Zoomrindrambaiko fihaonana. Notifirina izy rehefa nolazaiko azy ny antony… safidy iray ao amin'ny Zoom no ahafahanao manondrana ny mpitsidika tsirairay ho toy ny lalàm-peony manokana. Mandehana fotsiny any Fikirana> firaketana ary ho hitanao ny safidy:
Rehefa manoratra tafatafa iray aho, dia tahiriziko amin'ny solosaina eo an-toerana hatrany ilay audio. Vantany vao vita ny resadresaka dia manondrana ny audio any amin'ny lahatahiry fandraisam-peo eo an-toerana i Zoom. Rehefa sokafanao ny fampirimana ahatongavana dia ho hitanao ny làlan-kaleha tsirairay ao anaty fampirimana izay voatonona tsara ary avy eo dia ampidirina ny làlan'ny mpandray anjara tsirairay:
Izany dia ahafahako manafatra haingana ny tsirairay amin'ireo rakipeo mankany Garageband, manamboatra fanovana ilaina mba hanesorana kohaka na lesoka tsy ho amin'ilay lalana ilako, ampio ny intro sy ny outros, ary avy eo manondrana ho an'ny mpampiantrano podcast ahy.
Manoro hevitra anao mafy ihany koa aho ny hitazomana ny sakafonao horonan-tsary mandritra ny podcast! Rehefa miresaka amin'ny vahiniko aho, mino aho fa ireo fampisehoana horonan-tsary izay raisinay tsirairay avy dia manampy toetra am-polony amin'ny resaka. Ho fanampin'izay, raha te-hamoaka ny làlan-dahatsoratry ny podcast-ko aho, dia hanana ireo horonantsary ihany koa aho!
Amin'izao fotoana izao, ny fitazonana ny podcast-ko dia asa ampy!
Tags: dian-peofanondranana audio audiopodcast itypodcastinglalana misarakaZoomfandraketana zoom